Izithombe Zezithombe ze-3D - i-LucidPix
Ungayiphatha kanjani i-App Photo Access ku-iPhone iOS 14 I-Apple sekuyisikhathi eside ingumpetha wobumfihlo babathengi, futhi kuyakhombisa. Isici sabo sakamuva esithuthukisa ubumfihlo ku-iPhone sivumela abasebenzisi ukuthi balawule ukufinyelela kohlelo lokusebenza ngakunye esithombeni sabo ...
Amathiphu ayi-9 wezilwane ezithwebula izithombe zezilwane ezinye zezihloko eziheha kakhulu ukuzithwebula. Uhlobo ngalunye lwehlukile ngendlela yalo ekhethekile, okuvumela inqwaba yamathuba wezithombe ahlukile. Noma kunjalo, isilwane ...
Ungawubungaza Kanjani Ukubonga Okuphephile Ngesikhathi se-COVID Iningi lenu kungenzeka lizibuza ukuthi: “Ngingasigubha kanjani isidlo sakusihlwa sokubonga kulo nyaka phakathi kwalo lonke uvalo lwakwa-COVID?” ICDC ikhiphe imihlahlandlela ebalulekile okumele ilandelwe ...